Akụkọ - Gịnị bụ nkọwapụta na ndụ ọrụ nke eriri ọkụ ọkụ?
Kedu ihe nkọwa na ndụ ọrụ nke eriri ọkụ ọkụ?
Nkọwapụta ọkụ ọkụ ọkụ na ndụ ọrụ, taa iji nye gị otu otu azịza. Iji webata ọrụ ndị bụ isi nke ọkụ ọkụ ọkụ: a na-eji ọkụ ọkụ na-ebufe mmiri dị elu ma ọ bụ ihe ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ dị ka ụfụfụ. kpuchie ya na linen braid.A na-eme ka ọkpụkpụ ọkụ dị elu nke polymers dị ka polyurethane. Igwe ọkụ ọkụ nwere nkwonkwo ígwè na njedebe ọ bụla ma nwee ike itinye ya na eriri ọzọ iji gbasaa ebe dị anya ma ọ bụ na ntinye iji mee ka nrụgide nke injection mmiri dịkwuo elu.
Nkewa hose oku:
A na-ekewa eriri ọkụ ọkụ n'ụdị abụọ na mkpuchi na-enweghị mkpuchi: mkpuchi ọkụ ọkụ na-agụnye owu, eriri nylon lining gluu, polyester na-ejuputa eriri eriri, hemp mkpuchi plastik. nrụgide, ọ na-ekewa n'ime ụzọ anọ: 0.8Mpa, 1.0Mpa, 1.3Mpa na 1.6Mpa. A na-ekewa ha n'ime ụzọ anọ dịka dayameta: 50, 65, 80 ma ọ bụ 75 na 90 mm. Dị ka ụzọ ịkwa ákwà, ọ A na-ekewa ụzọ abụọ: eriri mmiri larịị na eriri mmiri twill. Ogologo mpaghara nchekwa mmiri ọ bụla na-adịkarị 20 mita.
Nkọwa na ihe nlereanya nke hose ọkụ:
Ụdị 8 65 teepu ntanye ntanye; Ụdị 13 65, 80 teepu gluu; Ụdị 16 65 teepu ntanye ntanye.
Ndụ ọrụ nke eriri ọkụ:
Dị ka ụkpụrụ mba dị mkpa si dị, ọ bụrụ na ejirila ọkụ ọkụ ahụ mee ihe otu ugboro, a ga-edochi ya ma ọ bụ na-echekwa ya site na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọkụ.A ghaghị ịnwale ya ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n'afọ, n'ihi na ọkụ ọkụ ọkụ kwesịrị ịnweta mmiri dị elu n'ime usoro eji eme ihe. Ọ bụrụ na oge ahụ dị ogologo, a ga-enwe nchikota nke mgbidi dị n'ime.Rubber na plastic hose na lining gluu. Ụzọ edozi belt dị iche iche.
N'elu bụ nchịkọta nke ọkụ sooks nkọwa na ndụ ọrụ nke azịza, m na-atụ anya na-enyere gị aka.Specialized na mmepụta nke ụdị ọ bụla nke ọkụ sooks, Dongfang mgbapụta, Micro oku ọdụ na ndị ọzọ dị iche iche nke ọkụ ngwá, welcome ọrụ ka. bia na-agba izu, a ga-arara anyị nye ọrụ gị.